Jaaliyada Norway oo la shirtay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliya. - NorSom News
Isbuucan waxaa dalka Norway marti ku ahaa gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya( National Independent Electoral Commission), Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yareey.
Xaliimo oo u timid ka qeybqaadashada shir muhiim ah oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, ayna soo qaban-qaabiyeen ururadda Somali Norwegian Strategic Partners( SNSP) iyo Fellesrådet Afrika, ayaa isbuucan sidoo kale la kulantay wasaaradda arrimaha dibadda Norway, gaar ahaan Ergeyga Gaarka ah ee Norway ee Soomaaliya, Heidi E. Johansen, iyo madaxa safaaradda Norway ee Muqdisho Haakon Svane. Sidoo kale Haliimo ayaa mudada ay joogto Norway la kulantay ururo toboneeyo gaarayo oo ay kamid yihiin ururka Norwegian Council for Africa, Development Fund, Utviklingsfondet iyo The Oslo Center.
Xaliimo Yareey ayaa sidoo kale maanta lagu mari-qaaday aqalka baarlamaanka Norway, kadib markii ay casuumaad u fidisay Xildhibaan Maryan Cabdi Xuseen oo ah xildhibaanadda soomaalida ah ee kujirto baarlamaanka.
Kadib marka ay shaley usoo dhamaadeen shirarkii ay u timid, waxey shir afur ah oo kooban la qaadatay xubno ka socdo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway, gaar ahaan magaaladda Oslo. Iyada oo uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashadda oo ay ka shaqeyneysay 7-dii sano ee ugu danbeeyay.
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka warantay suurtogalnimadda in Soomaaliya afar(4) sano kadib laga qabto doorasho cod iyo qof ah, iyo caqabaddaha ku hor-gudban, ayna ugu horeyso arrinta dhameystirka dastuurka qabyadda ah ee Soomaaliya.
Ururka Somali Norwegian Strategic Partners( SNSP) oo ah ururka Gudoomiye Halima Ismail ku casuumay Norway, ayaa gudoonsiiyay bilad-sharaf mahad-naq ah. Suldaan Bashiir Sheikh Maxamed Geele oo ah odoyaasha iyo salaadiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway, ayaana isaga oo ka wakiil ah jaaliyada Norway Gudoomiye xaliimo gudoonsiiyay bilad-sharafta.